Apple inotangisa yechitatu beta yeOS X 10.11.6 El Capitan | Ndinobva mac
Hongu, vazhinji vedu tatova nemisoro pane iyo nyowani macOS Sierra inoshanda system, asi chokwadi ndechekuti isu tichiri muEl Capitan uye vakomana vanobva kuCupertino havasi kupotsa musangano wavo kuti vatange Ndiyo beta yechitatu yeOS X El Capitan 10.11.6.
Iyi beta nyowani, senge mushanduro dzakapfuura dzakaburitswa, haitiratidze iwo udzamu hwezvakawedzerwa uye zvakanyanya kushomeka kana paine chero nhau mariri. Izvo isu zvatiri pachena ndezvekuti iro ramangwana revashandisi vazhinji izvozvi ndere macOS Sierra 10.12 uye iyo yese inogona kumirira.
Apple ine pfungwa yekusiya yakagadzirira pasina chero kukundikana iyi yazvino vhezheni yezvatinoziva seOS X El Capitan, kuitira kuti patinosvetukira kune itsva sisitimu yekushandisa zvese zviri munzvimbo. Iyo kambani haina kuburitsa chero imwe beta ye macOS Sierra parizvino asi isu hatina kukahadzika kuti inogona kudaro chero nguva.
Ino yave nguva yekutarisisa kusiya iyi OS X El Capitan 10.11.6 isina matambudziko, ayo muchidimbu uye kana pasina kudzosera kumashure inogona kunge iri yazvino vhezheni inowanikwa kune vese avo vashandisi vasingamutsiridze maMacs avo. iyi vhezheni itsva yevagadziri chete iyo chaiwo bug fixes uye system kugadzikana kugadzirisa, asi kana paine chero nhau dzakasarudzika dzinowoneka, tivandudze neichi chimwe chekupinda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » OS X El Capitan » Apple inoburitsa yechitatu beta yeOS X 10.11.6 El Capitan
Ini HANDIZOISA iyo «OS Sierra» nekuda kwezvikonzero zviviri, 2.- kunogara kune matambudziko neyekutanga vhezheni. 1.- Ndine zvimwe zvirongwa zvisingatengeswe neAppStore uye sezvandinonzwisisa «Sierra» haizoregi kuti ini ndinoisa chero chinhu chisingabve kuAppStore saka yangu MacBook Pro ichagara naCaptain kusvikira chimwe chinhu chiripo.
Pindura kuna juanjose
Ini ndinobvumirana naJuanjose nenjodzi dzeiyo nyowani Apple OS, ndakaisa macOS Sierra mumuchina chaiwo, uye ndakaratidza kuti handikwanise kuisa zvirongwa zvekunze kuApp Store, chimwe chazvo ndiMatLab, inodiwa programming software munzvimbo dzakawanda. , izvi zvinoreva kuti ini handizokwanise kukwidziridza kune iyo nyowani OS.
Ini ndinofunga iko kukanganisa pane chikamu chaApple kutora nenzira iyi, kunyange ini ndinonzwisisa kuti vanozviitira kudzivirira kutadza kunokonzerwa nemasekondi.
Kana paine vagadziri muforamu ino, zvingave zviri nyore kukumbira terminal kubva kuApple kuti iise software yekunze
Peter Chipfuma (@Petereconomy) akadaro
Ehe, echitatu-bato zvirongwa zvinogona kuiswa. Chii chinoitika ndechekuti hazvisi pachena. Iwe unodhawunirodha chirongwa ichi kudesktop reSierra, tinya kurudyi uye "vhura" uye chirongwa chichiisa. Izvo ndizvo zvandakango verenga muforamu. Uchandiudza.
Pindura kuna Peter Economy (@Petereconomy)
Ini handikwanise kuisa sierra nekuti mac yangu akagara mukapteni, ndinofanira kutamira kumahwindo, mari zhinji kuti pakupedzisira ndishandise windows zvakare
Pindura kune eumac82
Maitiro ekuchinjisa kufona kubva kuApple Watch kune yako iPhone